8 Digital Design Trends maka 2017 | Martech Zone
Ihe eji eme ihe n'ụsọ osimiri na-arụ ọrụ dị egwu na-echekwa usoro imepụta ihe site na iwepụta ezigbo akwụkwọ ozi kwa afọ. 2017 dị ka afọ siri ike maka usoro imepụta - Ahụrụ m ha niile n'anya. Anyị ewebatala ọtụtụ n'ime ndị a maka ndị ahịa anyị na nke anyị ebe ụlọ ọrụ.
Maka afọ nke atọ n’ahịrị, anyị ewepụtala ụdị Kachasị ọhụrụ anyị na-ewu ewu na-ewu ewu ụdị infographic maka afọ 2017. Ọ bụ ezie na e nwere ụkpụrụ nke imewe nke zuru ụwa ọnụ na nke na-adịghị agafe agafe, a na-apụghị izere ezere enwerekwa usoro na-agbanwe kwa afọ ka omume ahụ na-agbanwe. Offọdụ n'ime usoro ndị a nwere ike ijide ma bụrụ akụkụ nke ụkpụrụ na-adịghị agafe agafe, ebe ndị ọzọ ga-ada. Ka anyị leba anya n’ihe anyị hụrụ n’afọ 2016 anyị na-atụ anya na ọ ga na-ewu ewu, yana ihe anyị nwere ike ịtụ anya na 2017.
Designdị Weebụsaịtị Weebụ maka 2017
Kaadị Dabere Kere - nlegharị anya na-aghọwanye nke a ma ama na saịtị maka ndị ọbịa ka ha lelee anya wee chọta ihe ha chọrọ.
Nnukwu Tydị Akwụkwọ - mbipụta akwụkwọ buru ibu na nke nwere obi ike na nhazi nke oge a na-ewu ewu.
Agba agba na-atụ azụ - Neon na agba ike agba agba na-agabiga flat na ụda ụwa ndị na-ewu ewu afọ ole na ole gara aga.
Ihe ngosi efu - obere, akara ngosi nkịtị na akara dị mkpa na-eto eto na akara ngosi.
Neon Ndị Gụsịrị Akwụkwọ - ịgbakwunye omimi na logos na ụda olu nwere agba neon siri ike bụ ụzọ dị mma iji pụta.
Ochie-Pastels - lilacs, na-acha anụnụ anụnụ, na pinks na agba ọcha dị nro jikọtara ya na usoro ndị siri ike.
Shadị obi ike - polygons, ọdịdị equilateral, na usoro geometric tinye arịrịọ.
n'echiche - ihe osise na ihe osise na-enye ahụmịhe pụrụ iche.
Otu n'ime saịtị ọkacha mmasị m kachasị anya m gara leta n'afọ a bụ Ogige Party Botanical Hard Sodas. Ozugbo i tinyere ihe karịrị afọ 21, dịrị njikere maka ahụmahụ dị ịtụnanya.
Tags: 2017nwa bluesagba agba agbaọdịdị ọdịdịihe odide ederedeimewe kaadiagbanhazi usoroihe osiseagba agbaagba ikeoriri ubiụdị geometricihe ngosi ihe osiseakara ngosi akara ngosiatụlilacneongradients nke neonNkwenyepastelpinksmkpa akara ngosiederede
“Cheedị iwere onye nnọchi anya ire ahịa na ịkwụ ụgwọ otu ọnwa maka ọrụ ha ma hapụ ha ka ọ laa - na-atụ anya ka mgbanwe ndị ahụ na-aga n'ihu.” Nke a bụ eziokwu - ndị ahịa / ndị na-elekọta ụlọ ọrụ kwesịrị inwe ezi uche gbasara atụmatụ ahụ ma ghara ịtụ anya ihe ịtụnanya ga-eme n'otu ọnwa. Ntọala kwesịrị ịtọ ntọala. Akwa post Doug!